Markay haweenku la kulmaan xaalad caafimaad oo aan fiicnayn, sida endometriosis, kooxdeena Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka waxay kugula talin karaan qalliinka xubinta taranka ee robotka. Nidaamka 'da Vinci®' waa habka ugu yar ee faafa ee daaweynta jirka ee laga helo Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH. Ku Qalitaanka mishiinka qalalan ee robotka lagu caawiyo Nidaamku wuxuu ku lug leeyahay qalabka kumbuyuutarka lagu xakameeyo si qalliin looga saaro ilmo-galeenka. Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan ku dul socono goobo yar yar, oo adag in la gaaro si aragti sax ah loo helo.
Maxay tahay sababta aan ugu baahanahay aaladda qalalan ee robot-ka?
Waxaan kugula talineynaa qalafsanaanta robot-ka markasta oo qof dhibaato ku qabo ilmo-galeenkiisa oo aan ka jawaabin daaweynta kale. Sababaha guud ee daaweyntan waxaa ka mid ah:
Burooyinka aan caadiga ahayn ee fibroid
Qalliinkan yar-yar ee soo-dhaca ee robot-ka caawiya wuxuu u baahan yahay ka soo kabasho aad uga yar kan hiddaha dhaqameed.
Dhowr sababood oo aad u baahan karto inaad ka fiirsato qalliinka qanjirka 'robotic hysterectomy' ee ka badan habka qalliinka dhaqameed waa inay bixisaa dhibaatooyin ka yar iyo dhiigga oo yaraada. Bukaannadeennu sidoo kale waxay leeyihiin bogsasho dhakhso leh markii ay cisbitaalka ku yaryihiin oo gaaban. Waxay sidoo kale la kulmaan xanuun aad u yar sababtoo ah jeexitaannada yaryar ee la isticmaalo, taas oo sidoo kale keenta nabarro yar.
Maxaa dhacaya inta lagu guda jiro qalliinka xubinta taranka ee robotka?
Qalitaanka qanjirka 'robot' waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo suuxdinta guud. Inta lagu jiro qalliinka, waxaa laga yaabaa inaan galino tuubo ka caawiya bukaanka inuu neefsado iyo kateetar ka caawiya inay ka baxaan kaadi ahaan. Meesha la jeexay ayaa laga sameeyaa meel u dhow badhanka caloosha, waxaana caloosha lagu shubay gaas si kooxdeena loo siiyo qol ku filan oo ay si guul leh ugu shaqeeyaan. Marka xigta, ilmo-galeenka ayaa lagu soo saarayaa qalab qalliin iyadoo la adeegsanayo nidaamka xakamaynta. Waxaan dooran karnaa inaan ka saarno ilmo-galeenka oo dhan ama qayb uun ka sarreysa makaanka afkiisa. Waxaan sidoo kale kugula talin karnaa in laga saaro tuubooyinka ugxan-sidaha iyo ugxan sidaha inta lagu guda jiro qalliinkan caawinta robotka ah. Qalliinku wuu dhammaystirmaa marka jeexitaannada la tolo oo la daboolo. Wadarta waqtiga qalliinka badanaa waxay socotaa 3 - 4 saacadood.
Waxa la filayo ka dib qalliinka jirka ee robot-ka
Qalliinka xubinta taranka ee maskaxda ka dib, bukaanka waxaa loo qaadaa qolka soo kabashada si loola socdo. Inta badan, bukaanku waxay filan karaan inay cisbitaalka sii joogaan dhawr maalmood. Markay guriga joogaan, waxaa muhiim ah in la raaco tilmaamahayaga oo dhan lana yimaado dhammaan ballamaha loo baahan yahay ee dabagalka ah. Meelaha jeexitaanka waa in had iyo jeer la qalajiyaa 2 - 3 maalmood ee soo socda. Ka fogow qaadista culus dhowr toddobaad. Wadar soo kabashada waxay qaadan kartaa dhowr toddobaad illaa dhowr bilood.
Ma filan karaa inaan miisaan yeesho qalliinka ka dib?
Bukaanka premenopausal waxay u badan tahay inay la kulmaan culeys ka kordhay kuwa postmenopausal. Sidoo kale, kuwa haysta qalliinka xubinta taranka oo buuxa, halkaasoo laga soo saaray ilma-galeenkooda, ugxan-sideyaasha, iyo afka ilmo-galeenka, waxay u badan tahay inay cayilaan qalliinka ka dib. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan, bukaankeennu had iyo jeer ma cuslaadaan miisaanka maxaa yeelay waqtiga soo kabashada ee la xiriira robot hysterectomy ayaa aad uga gaaban kan hab dhaqameedka xubinta taranka. Haddii aad ka walwalsan tahay kororka miisaanka, fiiri cuntadaada inta lagu jiro soo kabashada marka aad u yar tahay inaad firfircoonaanto.
Baro sida qanjirka 'robot hysterectomy' u xalin karo xaaladaha dumarka, sida endometriosis
Markay haweeney ubaahantahay qalitaanka xubinta taranka, kooxdeena Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay kawada hadli karaan qalliinada kaladuwan ee aan bixinno, oo ay kujiraan robot-ka caawinta qalitaanka. Si aad u ballansatid ballan si aad wax badan uga ogaatid qalliinkan dumarka ku dhaca, call xafiiskayaga Columbus, Dublin, ama Westerville, OH maanta.